အိမ်ကွင်းနိုင်ပွဲနဲ့အတူ အဆုတ်(၂)လုံးလူသားပက်ဂျီဆန်လို ကစားသမားကိုပြန်ရခဲ့တဲ့ မန်ယူ – FBV SPORT NEWS
အဆုတ်(၂)လုံးလူသားပက်ဂျီဆန်ကဲ့သို့သော ကစားသမားကိုပြန်ရခဲ့တဲ့ မန်ယူနိုင်ပွဲသုံးသပ်ချက်များ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ ပရီးမီယားလိဂ် အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်အဖြစ် လိဒ်အသင်းကို ၆ – ၂ ဂိုးဖြင့် ဂိုးပြန်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်….တသင်းလုံးကစားပုံကောင်းမွန်ခဲ့ခြင်းနဲ့အတူ အမြင့်ဘောပြစ်ချက်လေးကလွဲရင်အကုန်ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်…
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ဆိုးရှားလ်ရဲ့ ပုံမှန် 4-2-3-1 ကွက်နဲ့ ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီး ညာတောင်ပံမှာ လူငယ်ကစားသမား James ပါပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်…ပွဲစပြီး ၂မိနစ်မှာဘဲ တော်မီနေးကနေ ဂိုးတွေဆက်တိုက်သွင်းခဲ့ပြီး တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်…
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်လက်ရှိခြေစွမ်းမှာ အရင် ရွှေရောင်နေ့ရက်တွေထဲက ပက်ဂျီဆန်လိုမျိုး အဆုတ် (၂)လုံးနဲ့ လူသားကို ယူနိက်တက်တို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်…
အဲ့ဒီကစားသမားတော့ ဖရက်ဒ်ပါဘဲ ပထမပိုင်းပွဲစတည်းကဘဲ ဖရက်ဒ်ဟာ ကွင်းလယ်အဖျက်ကောတိုက်စစ်ကိုရောလိုက်ပါကစားကာ တကွင်းလုံးနီးပါးမမောမပန်းနိုင်လိုက်ကစားခဲ့တာကိုတွေ့၇ပါတယ်…နောက်တခုက ဒီနေ့တပွဲလုံးသူဟာ ကွင်းလယ်အထိုင်က နေ တိုက်စစ်နဲ့ နောက်တန်းကို ချိတ်ဆက်ကစားခဲ့တာကိုလည်း ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြင်ခဲ့ရပါတယ်….
ကွင်းလယ်မှာ ဘရူနို တော်မီနေးတို့ အချိတ်အဆက် မိမိကစားနိုင်ခဲ့ကာ နောက်တန်းသို့လည်း ဖိအားမရောက်အောင် ကွင်းလယ်အဖျက်နေရာကနေလည်းတာဝန်ကျေပွန်စွာ ကစားပေးခဲ့ပါတယ်..တပွဲလုံးနေရာစုံကစားကာ အပြေးမရပ်ဘဲ ဆော့နိုင်သော အဆုတ်(၂)လုံးနဲ့ လူသားကို မန်ယူတို့ ရရှိခဲ့ပါတယ်….
ဖရက်ဒ်အနေနဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းအတိုင်းဆို ပုံမှန် ပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့ကစားသမားစာရင်းထဲပါခဲ့ပြီဆိုတာတော့ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး……